Maxay yihiin sababaha guud ee diidmada fiisaha elektarooniga ah ee Hindida?
Sababaha diidmada elektarooniga ah ee fiisaha elektarooniga ah iyo talooyin waxtar leh oo looga hortago
Maqaalkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad ka fogaato natiijo aan guuleysan oo ku saabsan Codsigaaga elektaroonigga ah ee Hindida ah si aad u codsan karto kalsooni iyo safarkaaga Hindiya uu noqon karo mid dhib la'aan ah. Haddii aad raacdo talaabooyinka hoos ku xusan, markaa suurtagalnimada diidmada Codsigaaga Visa-ka Hindida ah ee Hindida ah ayaa la yareyn doonaa. Waad dalban kartaa Codsiga Visa Hindida halkan.
Fahmaan shuruudaha looga baahan yahay e-Visa Indian ama (Indian Visa Online)
Muhiimadeeda in marka hore la fahmo shuruudaha lagama maarmaanka u ah fiisaha elektaroonigga ah ee Hindida ah ka hor inta aynaan baranin sababaha guud ee diidmada iyo talooyinka looga hortago. In kasta oo shuruudaha ay iska fudud yihiin, boqolkiiba in yar oo ka mid ah codsiyada loogu talagalay Hindisaha Visa-ka ee Hindida ah ayaa wali la diiday.
Shuruudaha lagama maarmaanka ah loogu talagalay fiisada elektarooniga ah ee Hindida ah waxaa ka mid ah:
Baasaboorku waa inuu noqdaa Baasaboor caadi ah (kaas oo aan ahayn Baasaboor Rasmi ah ama Baasaboor Diblomaasi ah ama Baasaboor Qaxooti ah ama Dukumentiga Safarka nooc kasta oo kale ah) kaasoo socon doona muddo 6 bilood ah marka la soo galo.
Waxaad u baahan doontaa hab lacag bixin oo ansax ah (sida Debit ama kaarka amaahda ama PayPal) iyo Aqoonsi Email oo ansax ah
Waa inaadan lahayn taariikh dembi. Waxaad ka akhrisan kartaa Siyaasadda Visa ee Hindiya halkan.
Waxaad wax badan ka akhrisan kartaa Shuruudaha Dukumintiyada Fiisaha Hindida halkan.
Halkan waxaa ah 17-ka Sababood ee ugu horreeya ee Hindida diidmada elektarooniga ah iyo tabaha looga fogaado
Qarinta asalka dambiyadaQarinta taariikhdaada dambiilenimo, sikastaba ha u yaraadee dalabkaaga e-Visa-ha Hindiya. Haddii aad isku daydo inaad ka qariso xaqiiqda Hay'adda Socdaalka ee Hindiya dalabkaaga Visa Visa-ka ee Hindiya, dalabkaaga ayay u badan tahay in la diido.
Ma bixinayo magac buuxa: Tani waa qalad guud oo si fudud looga hor tagi karo laakiin nasiib daro waa sababta ugu weyn ee tirada badan ee diidmada elektarooniga ah ee Hindida ah. Waa inaad bixisaa magacaaga, magacaaga iyo kanaga Magaca dhexe, haddii aad leedahay 1. Ha isticmaalin xarfaha hore ama ka bood magacyada dhexe. Tusaale Tony R Baker ama Tony Baker halkii uu ka ahaan lahaa Tony Ross Baker sida ku cad baasaboorka.
Codsi badan / shaqo la'aanTani waa 1 ka mid ah sababaha caadiga ah ee diidmada e-Visa Hindiya. Taas macneheedu waxa weeye in aad hore u codsatay e-Visa kaas oo wali shaqaynaaya oo shaqaynaya. Tusaale: Waxa laga yaabaa inaad hore u codsatay Ganacsiga e-Visa ee Hindiya kaas oo shaqeynaya 1 sano oo u oggolaanaya galitaanno badan. Ama waxaa laga yaabaa inaad horeyba u haysatay 1 Sanno ama 5 Sano Dalxiiska e-Visa ee Hindiya taasi wali waa ansax laakiin waxaad lumisay iimaylkii ama waad daabacday. Xaaladahan, haddii aad dib u codsato e-Visa Hindida markaas waxay u badan tahay in lagu diido sababtoo ah waqti cayiman waxaa laguu oggol yahay kaliya 1 Hindiya Visa Online.
Asal ahaan Pakistan: Haddii aad xustay wax xiriir ah oo lala yeesho Baakistaan ​​iyada oo la tixraacayo waalidkaa, waalidkaa awoowaha u ahaa, xaaskaaga / seygaaga ama haddii aad ku dhalatay Pakistan. Xaaladdan oo kale Codsigaaga elektarooniga ah ee fiisaha elektaroonigga ah waxay u egtahay inaan la oggolaan doonin waana inaad dalbataa fiisaha caadiga ah ama caadiga ah ee Hindida ah adoo booqanaya safaaradda Hindiya ee kuugu dhow ama Guddiga Sare ee Hindiya.
Waa inaad tagtaa Safaaradda Hindiya oo aad codsataa fiiso waraaqo oo caadi ah adigoo bilaabaya hawsha halkan.
Nooca e-Visa ee aan sax ahayn: Markii ay is khilaafeen ujeedkaaga ugu weyn ee booqashada Hindiya iyo nooca E-Visa-ha Hindida ah ee aad dalbato. Tusaale ahaan, sababta ugu weyn ee aad u booqatid India waa ganacsi ama ganacsi dabiici ah laakiin waxaad dalbaneysaa Visa Dalxiis. Ujeeddada aad sheegtay waa inay u dhigantaa nooca fiisaha.
Ka baro noocyada fiisaha elektaroonigga ah ee Hindida ah halkan laga heli karo.
Baasaboorka ayaa dhacaya dhawaan: Baasaboorkaagu ma shaqeynayo 6 bilood waqtiga lagu soo galayo.
Maahan Baasaboor Caadi ah: Baasaboor Qaxooti, ​​Dibloomaasiyadeed iyo Rasmi ah uma qalmaan e-Visa Hindi ah. Kama dalban kartid Visa-ha Hindida Online xitaa haddii aad ka tirsan tahay dal u qalma e-Visa Hindi ah. Haddii aad u baahan tahay inaad ka dalbato eVisa Hindiya, markaa waa inaad ku safarto baasaboor caadi ah. Dhammaan noocyada kale ee baasaboorrada, waa inaad ka dalbataa fiise dhaqameed ama mid caadi ah fiisaha socdaalka ee Hindida ee kuugu dhow Qunsuliyadda Hindiya ama Safaaradda.
Lacag ku filan: Hay'adda Socdaalka Hindiya waxay kaa codsan kartaa inaad caddeyso inaad haysato lacag kugu filan oo aad ku taageerto joogitaankaaga Hindiya. Ka gaabinta bixinta macluumaadkaan waxay sababi kartaa diidmada fiisaha elektarooniga ah ee Hindida.
Sawir Waji Baadhid ah: Sawirka wajiga ah ee lagaa rabo inaad bixiso waa inuu si waadax ah u muujiyaa wajigaaga madaxaaga sare ilaa garka, waa inuu qariyaa qayb kasta oo wajigaaga ah ama uu noqdaa mid cakiran. Dib ha u isticmaalin sawirka ku jira baasaboorkaaga.
Akhri wax dheeraad ah Shuruudaha Visa ee Hindida Hindida ah.
Sawirka Baasaboorka oo aan cadeyn: Bogga gaarka ah ee baasaboorka oo ay ku jiraan taariikhda dhalashada, magaca, iyo lambarka baasaboorka, taariikhda baasaboorka iyo taariikhda uu dhacayo baasaboorka waa inay caddahay. Sidoo kale iska hubi in 2-da sadar ee ku yaal xagga hoose ee baasaboorka ee loo yaqaan MRZ ( Magnetic Readable Zone ) aan la jarin koobigaaga baasaboorka ama sawirka laga qaaday taleefanka.
Akhri wax dheeraad ah Shuruudaha Visa Passport-ka Hindiya.
Khaldanida Macluumaadka: Marka laga soo tago inaadan magacaaga si sax ah ugu sheegin baasaboorkaaga, haddii aad qalad ku sameyso 1 ka mid ah meelaha baasaboorka ee ku yaal Codsiga e-Visa ee Hindiya, markaa codsigaaga waa la diidi karaa. Markaa taxaddar gaar ah u yeelo marka aad buuxinayso meelaha muhiimka ah sida lambarka baasaboorka, taariikhda dhalashada, goobta dhalashada, waddanka baasaboorka iwm.
Tixraac aan sax ahayn oo ka timid waddankii hooyoCodsiga e-Visa ee Hindiya wuxuu u baahan yahay tixraac ama xiriir ka socda waddankaaga baasaboorka ama waddankaaga hooyo. Tan waxaa loo baahan yahay xaalad degdeg ah. Haddii aad tahay muwaadin Australian ah oo ku nool Dubai ama Singapore dhowrkii sano ee la soo dhaafay oo aad damacsan tahay inaad booqato Hindiya, waxaad weli u baahan tahay inaad tixraac ka bixiso Australia oo aanad ka bixin Dubai ama Singapore. Tixraacu wuxuu noqon karaa 1 xubnaha qoyskaaga ama asxaabtaada.
Lumiyay baasaboor hore Waxaad dalbaneysay Visa cusub oo aad ku timaado Hindiya waadna lumisay baasaboorkiisii ​​hore. Haddii aad dalbatid fiisada elektaroonigga ah ee Hindida ah maxaa yeelay waxaad lumisay baasaboorkii hore waxaa lagu weydiin doonaa inaad keento warbixin booliis oo lumisay.
Fiiso elektaroonig ah oo khaldan: Waxaad booqasho caafimaad ugu imaaneysaa Hindida oo aad codsaneysaa fiisada ku-soo-gal Caafimaad. Bukaanku wuxuu u baahan yahay inuu dalbado Visa Caafimaad iyo 2 saaxiibbo ama qoys ayaa la socon kara bukaanka Visaha Caafimaadka ee Fiisaha Imaanshaha Caafimaadka ee Hindiya.
Read ku saabsan Caafimaadka e-Visa ee Hindiya iyo Ka Qaybgalka Caafimaadka e-Visa ee Hindiya halkan.
Warqad Ka Maqan Isbitaalka oo Fiisaha elektaroonigga ah . Warqad cad oo ku saabsan warqadda madaxa ee Isbitaalka ayaa looga baahan yahay Isbitaalka daaweynta / nidaamka / qalliinka loogu talagalay bukaanka codsanaya Fiisaha elektaroonigga ah.
Waxaa la waayey shuruudaha fiisaha e-ganacsiga: Fiisaha Ganacsiga Online-ka ee Hindiya wuxuu u baahan yahay macluumaad (oo ay ku jiraan cinwaanka websaydhka) labada shirkadood, shirkadda ajnabiga ah ee codsadaha iyo sidoo kale shirkadda Hindida ah ee la booqanayo.
Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shuruudaha VB India ee Visa.
Kaarka ganacsiga oo maqan: Codsiga e-Visa-ka Hindida ee Ganacsi wuxuu u baahan yahay kaar ganacsi ama ugu yaraan, saxeex emayl ah oo muujinaya magaca shirkadda, magacaabista, cinwaanka emaylka iyo lambarka taleefanka. Qaar ka mid ah codsadayaasha ayaa si kama 'ah u bixiya koobi kaarka fiisada ee Visa / Mastercard, laakiin tani waa khalad.
Waxaad heshay fiisadaada elektaroonigga ah ee Hindida ah laakiin wali waa laguu diidi karaa gelitaanka
Haddii aad heshay fiisadaada elektaroonigga ah ee Hindiya oo leh xaalad la Siiyey, xitaa markaa waxaa jira suurtagalnimada in lagaa hor istaagi karo safarka oo loo diido inaad gasho Hindiya. Sababaha qaar waxaa ka mid ah:
Bixinta e-Visa-ka Hindisaha ee Hay'adda Socdaalka ee Hindiya ma waafaqsana faahfaahinta ku qoran baasaboorkaaga.
Baasaaboorkaaga kuma lihid 2 bog oo faaruq ah ama maran oo looga baahan yahay inaad ku dhufato garoonka diyaaradaha. Ogsoonow inaadan uga baahnayn wax shaabad ah Qunsuliyadda Hindiya ama Safaaradda Hindiya.
Faallooyinka ugu dambeeya ee ku saabsan e-Visa-ha Hindiya
u Si looga fogaado diidmada dalabkaaga elektarooniga ah ee elektarooniga ah, waxaad u baahan tahay inaad ka feejignaato faahfaahin kooban. Haddii aad weli su'aalo qabtid fadlan wax u qor info@evisa-india.org.in or halkan ka codso Codsiga Fiisaha Hindida loogu talagalay habka fudud ee loo fududeeyay, loona habeeyay ee nidaamka dalbashada ee loogu talagalay dalbashada Visa Visa Online.